ရေးပြီးသမျှ ဓမ္မရသများနှင့် အတွေးရသများ | " မနာပဒါယီ "
ရေးပြီးသမျှ ဓမ္မရသများနှင့် အတွေးရသများ
။ အချိန် 3/02/2008 03:30:00 PM
ကိလေသာပယ်ခွါရေးနှင့် သိက္ခာသုံးရပ် အကျင့်မြတ်...
အောင်မြင်ခြင်း၏ အဓိကပဲ့ကိုင်ရှင် (သို့) အကြီးအမှူးကြီးလေးပါး...
အကြီးဆုံးအကုသိုလ်ကံ (သို့) ပဉ္စာနန္တရိယကံ...
ဝိဘဇ္ဇဝါဒနဲ့ Critical thinking...
မရှိမကောင်း ရှိမကောင်း (သို့) မရှိမကောင်း ရှိမှကောင်း...
လုံအောင်မိုးထား စိတ်၊ အိမ်များ...
သုကို ယှဉ်၊ ဒုကို ကြဉ်...
နှစ်ဆယ်၊ ရှစ်ဆယ် သီအိုရီ (20%80% theory)
အဝေးအနီး အရေးမကြီးပါ။ အရေးကြီးသည်မှာ...
ပ၀ါရဏာက ပေးတဲ့ မက်စေ့ခ်ျ (message) (သို့) ပ၀ါရဏာ ပြုကြစို့...
လယ်တစ်ကွက်၊ ပေါက်တူးတစ်လက်နဲ့ ရဟန်းလူထွက်...
တည်၊ အို၊ သေမှု ဤသုံးခု အဆုံးပြုလိုသော်
သိ ပယ် ဆိုက် ပွား...
ဒု - သ - န - သော...
အလယ်အလတ်လမ်း (သို့) မဂ္ဂင်ရှစ်ရပ် လမ်းသွယ်မြတ်...
ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှု (သို့) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နှင့် ပဋ္ဌာန်း...
ပြောင်းသွားပေမယ့် အကောင်းပြောင်း မဟုတ်ပြန်တော့...
Living together နှင့် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ...
ဒါနလုပ်တာလည်း ကောင်းပါတယ်။ သို့သော်...
အမျက် ပြေ၍ အခက်ဝေစေရန်...
အူမ,တောင့်မှ သီလ စောင့်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်...
Blind date and Chatting...
အမှားပုံကို ဉာဏ်နှင့်ရှု၊ အမှန်ပုံကို လိုက်၍တု...
ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူး ဆိုရင် ဖြင့်...
၀ဋ်မှာအမြဲ ငရဲမှာ အပ...
လူဖြစ်စေ ရဟန်း ဖြစ်စေ..
အလို မကျ ဖြစ်ကြရာဝယ်…
ဉာဏ်ဝီရိယ ရှိပါမှ ကံကကူညီမည်…
အကောင်းဆုံးအချိန် (သို့) ယခုပင်လျှင် …
အကြွေးဆပ်ရင်း အကြွေးထပ်နေကြသူများ …
အစွယ်ထောင်လျှင် အပါယ် ဘောင်သို့…
ခလုပ်ထိမှ အမိတကြ မယ်ဆိုရင်…
အစ မလုပ်နဲ့ အဆုံးမရှိ ဖြစ်တတ်တယ်…
သဗ္ဗေ သတ္တာ ကမ္မဿကာ…
ဗြဟ္မစိုရ် တရားနှင့် လူမှု ဆက်ဆံ ရေး…
မချစ် မမုန်း အကောင်း ဆုံး…
အကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်း၊ မဖြစ်ကြောင်း တရားများ..
သစ္စာတရား၊ ဖြောင့်ဖြူးသောလမ်း နှင့် ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှု…
ဂုဏ၀န္တေ ပဿန္တိ ဇနာ…
ရောမ ရောက်တိုင်း ရောမလိုကျင့်သင့်ပါသလော…
အရဟံ ဂုဏ်တော်အား ကြည်ညို ကြည့်ခြင်း…
စေတနာသုံးတန် ပြည့်စုံဖို့ ဆိုရာဝယ်…
စုစည်းထားမှု = ဓမ္မရသစာစုများ, တွေးမိသမျှ
ကောင်းမှုအစု ကြိုးစားပြုလော့ ...
မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သူငယ်ချင်းများကို အရက်ဖိုး...